Ndeipi Mitambo Inogona Kuitwa Nevanhu MuWheelchair Play | KarmanHealthcare.com
Kutenga a wiricheya kutamba mitambo
Vanhu vanoshandisa mavhiripu unogona kunakidzwa uye kukwikwidza mukati wiricheya mitambo, yakagadzirirwa kushingaira wiricheya vanoshandisa. Tenga Sport Chairs
Ndeipi Mitambo Inogona Vanhu Kupinda mavhiripu tamba
Vanhu vari wiricheya yakasungwa inogona kunakidzwa uye kukwikwidza mumitambo inoenderana nehunyanzvi hwavo. Zvizhinji mavhiripu mitambo inoenderana yakashandurwa kubva kune mimwe mitambo inozivikanwa. wiricheya mitambo yakatanga kugadzirwa nekuti paive nerutsva-rwakawanikwa paruzhinji nezvevanhu vakaremara vachisiiwa kunze kwemitambo nemitambo zvachose. Nepo mitambo vanhu vanogona kutamba mukati mavhiripu akafanana chaizvo nemutambo wakasungwa, pane mimwe misiyano mumirau nemirau yekugadzirisa mutambo uyu seyakazara. Icho chiitiko chinounza chakanyanya kutarisisa kupfungwa yekuti munhu wese, zvisinei nemamiriro avo ezvinhu, anofanirwa kunakidzwa nemitambo.
Kune vazhinji wiricheya mitambo yaunogona kutamba
Mitambo iyo vanhu vari mavhiripu unogona kutamba unosanganisira zvimwe zvinotevera: baseball, basketball, nhabvu, hockey, bowling, tenisi, tafura tenisi, uye kumhanya. Mazhinji emitambo iyi anotambwa nevashandisi vakagara mumanyowani mavhiripu, yakawanda yemanyorero mavhiripu zvinoshandiswa pamitambo iyi zvimwe tsika yakagadzirirwa mushandisi, kana yakagadzirirwa zvakanyanya mutambo. Ndokusaka rimwe bhuku remanyorero mavhiripu inoshandiswa pamitambo ine angled kumashure mavhiri ayo anotendera mushandisi kuti ave nekugadzikana kwakawanda uyezve achitsigira kukuvara kwemuviri apo vatambi vanorovera mukati meumwe neumwe. Kune mimwe mitambo yakachinjirwa wiricheya vashandisi vanoda simba mavhiripu kuti ishandiswe nemutambi wese, mhando iyi yemitambo ingave yakasarudzika kupfuura wiricheya yemawoko mitambo nekuti pane zvishoma wiricheya-vashandisi vakasungwa vanoshandisa chigaro chemagetsi pane chavanoshandisa cheya chebhuku.
Most Popular wiricheya Sports
Mutambo unozivikanwa kwazvo unoenderana wiricheya vashandisi iri wiricheya Basketball. wiricheya basketball inogona kunge iine rutsigiro rwakanyanya kumashure kwayo, kuziva veruzhinji kwakakwira kune basketball inotambirwa mukati mavhiripu. Yekutanga chiitiko chebasketball kuchinjirwa wiricheya vashandisi vaive muna 1956 payakaunzwa kuPan Am Jets. Zvese zvakatanga nerutsigiro muna 1946 apo wiricheya mitambo yakatanga kuunzwa pasi rose. Kune mitemo yakawanda yakashandurwa mukati wiricheya Basketball kuti ikwanise kusanganisira wiricheya vashandisi. Kufamba mutemo mubasketball uko mutambi anofamba makumbo ese akabata bhora. Muchigaro chebhasikiti, kufamba kunodaidzwa kana mutambi achibata mavhiri ake kanopfuura kaviri mushure mekunge apfuudzwa bhora newaanotamba naye kana inbound.
tsika Sports mavhiripu
Mukupedzisa, wiricheya mitambo yanga ichiwana rutsigiro munguva pfupi yapfuura kubva ku kuremara munharaunda nevamwe vese vane chekuita nazvo kuremara. Kune makambani anogadzira tsika mutambo mavhiripu yakagadzirirwa kune wiricheya vashandisi vari kushingaira uye vanotamba mitambo nguva dzose. Iwe haufanire kunge usingamboshandisa yako yemazuva ese wiricheya kutamba wiricheya inoenderana nemitambo, izvi zvinokonzeresa kupfeka zvisina mwero uye zvichacheka hupenyu hwechigaro pamwe pamwe nehafu. Kune hwakawanda mitsara yemitambo yakashandisirwa zvizere wiricheya vashandisi uye pane mumwe mutambo unowanikwa kune akawanda akasiyana mamiriro a wiricheya mushandisi anogona kunge aine. Nekuti iwe uri kushandisa a wiricheya hazvireve kuti haugone kunakidzwa nekunakidzwa uye kukwikwidza hunhu hwe wiricheya mitambo.
Kubhadhara Basketball muWiricheya
Basketball Wiricheya Vagadziri
Ko vanhu vari mumawiricheya vanogona kutamba mitambo?
Ndeapi Mhando Yemitambo Iripo Kune Vanhu MuWheelchair?
Kutanga kweWheelchair Sports